मलेसियाबाट २४ शव ल्याइयो, यो कहिले रोक्ने ? - Mero Tribune
Home ON POINT मलेसियाबाट २४ शव ल्याइयो, यो कहिले रोक्ने ?
मलेशियाबाट २४ वटा नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको छ। निगमको वाइडबडी ए३३० जहाजले मलेशियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट एकैपटक २४ वटा शव र तीन वटा अस्तु नेपाल ल्याएको हो।
नेपाल ल्याइएका ती शव शनिबार नै आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको छ।
नेपालबाट दैनिक युवा रोजगारीको लागी बिदेश जाने गर्छन् । सरकारले यसलाई रोक्न कुनै ठोस कदम चालेको छैन ।
सरकारले नेपालमा नै केहि रोजगारी सृजना गर्न सके यो धेरै मात्र यो कम हुने थियो ।
Previous articleबन्जीजम्प गर्ने क्रममा युवतीको मृत्यु
Next articleमौलिक कला र संस्कृति झल्कने द कल्चर रिर्सोट